ကလေး ခွေးကိုက်ခံရရင် ... | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေး ခွေးကိုက်ခံရရင် ...
ကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင် ခြေထောက်မှာ အများဆုံး အကိုက်ခံရတတ်ပါတယ်။
● ဒဏ်ရာသေးရင် - ဒဏ်ရာကို ရေရယ်၊ ဆပ်ပြာရယ်နဲ့ သေချာဆေးကြောပါ၊ ရောဂါပိုးဝင်တာက ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပိုးသတ်ဆေးပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို လိမ်းပါ။
● ဒဏ်ရာကြီးရင် - သွေးထွက်များရင် အဝတ်ခြောက် သန့်သန့်တစ်ခုနဲ့ သွေးတိတ်အောင် စည်းနှောင်ပြီး ဆရာဝန်ဆီ အမြန်သွားပါ။
● ခွေးက ပိုင်ရှင်ရှိရင် ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးတာလားမေးပါ။ အရေးကြီးဆုံးက ခွေးရူးပြန်ကာကွယ်ဆေးပါ။
● ခွေးကို တစ်ခုခု သွားလုပ်လို့၊ စလို့ကိုက်တာလား။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ လာကိုက်တာလားဆိုတာ မေးပါ။
Biogesic for kids IA 1
1. ဒဏ်ရာကို သန့်ရှင်းအောင် သေချာဆေးကြောရမယ်။
2. အပေါက်တွေကို ရေသန့်၊ စီးနေတဲ့ ရေနဲ့ ဆေးရမယ်။
3. ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာတွေ့ရင် ဓာတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး စစ်ဆေးရမယ်။
4. ဒဏ်ရာကို မအုပ်၊ မချုပ်ဘဲ ဖွင့်ထားရမယ်။
5. ပိုးဝင်နိုင်တဲ့ လက္ခဏာရှိရင် ပိုးသတ်ဆေး ပေးပါလိမ့်မယ်။
6. ဒဏ်ရာ ပိုးဝင်တာ ရှိ၊ မရှိကို ၂၄-၄၈ နာရီအတွင်း ပြန်ပြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
7. လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါးမှာရှိတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကိုတော့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကုသရပါမယ်။
8. ခွေးရူးကာကွယ်ဆေး/မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့ လို၊ မလိုကို ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
>> မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖို့လိုလား?
ဒဏ်ရာက သန့်တယ်ဆိုရင် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို အပြည့်ထိုးထားဖူးရင်တော့ မလိုပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒဏ်ရာက ကြီးတယ်၊ မသန့်ဘူး။ ကလေးက ကာကွယ်ဆေးကို တစ်ခါမှ မထိုးဖူးဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အပြည့်မထိုးဖူးဘူးဆိုရင်တော့ ထိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Biogesic for kids IA 2
ကေလးငယ္ေလးေတြဆိုရင္ ေျခေထာက္မွာ အမ်ားဆုံး အကိုက္ခံရတတ္ပါတယ္။
● ဒဏ္ရာေသးရင္ - ဒဏ္ရာကို ေရရယ္၊ ဆပ္ျပာရယ္နဲ႔ ေသခ်ာေဆးေၾကာပါ၊ ေရာဂါပိုးဝင္တာက ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ပိုးသတ္ေဆးပါဝင္တဲ့ လိမ္းေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို လိမ္းပါ။
● ဒဏ္ရာႀကီးရင္ - ေသြးထြက္မ်ားရင္ အဝတ္ေျခာက္ သန႔္သန႔္တစ္ခုနဲ႔ ေသြးတိတ္ေအာင္ စည္းေႏွာင္ၿပီး ဆရာဝန္ဆီ အျမန္သြားပါ။
● ေခြးက ပိုင္ရွင္ရွိရင္ ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးတာလားေမးပါ။ အေရးႀကီးဆုံးက ေခြး႐ူးျပန္ကာကြယ္ေဆးပါ။
● ေခြးကို တစ္ခုခု သြားလုပ္လို႔၊ စလို႔ကိုက္တာလား။ ဘာမွမလုပ္ဘဲ လာကိုက္တာလားဆိုတာ ေမးပါ။
1. ဒဏ္ရာကို သန႔္ရွင္းေအာင္ ေသခ်ာေဆးေၾကာရမယ္။
2. အေပါက္ေတြကို ေရသန႔္၊ စီးေနတဲ့ ေရနဲ႔ ေဆးရမယ္။
3. ပိုးဝင္တဲ့လကၡဏာေတြ႕ရင္ ဓာတ္ခြဲခန္းပို႔ၿပီး စစ္ေဆးရမယ္။
4. ဒဏ္ရာကို မအုပ္၊ မခ်ဳပ္ဘဲ ဖြင့္ထားရမယ္။
5. ပိုးဝင္ႏိုင္တဲ့ လကၡဏာရွိရင္ ပိုးသတ္ေဆး ေပးပါလိမ့္မယ္။
6. ဒဏ္ရာ ပိုးဝင္တာ ရွိ၊ မရွိကို ၂၄-၄၈ နာရီအတြင္း ျပန္ၿပီး စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။
7. လက္ဖဝါး၊ ေျခဖဝါးမွာရွိတဲ့ ဒဏ္ရာေတြကိုေတာ့ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ကုသရပါမယ္။
8. ေခြး႐ူးကာကြယ္ေဆး/ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးဖို႔ လို၊ မလိုကို ဆရာဝန္က ဆုံးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။
>> ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး ထိုးဖို႔လိုလား?
ဒဏ္ရာက သန႔္တယ္ဆိုရင္ ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးကို အျပည့္ထိုးထားဖူးရင္ေတာ့ မလိုပါဘူး။ တကယ္လို႔ ဒဏ္ရာက ႀကီးတယ္၊ မသန႔္ဘူး။ ကေလးက ကာကြယ္ေဆးကို တစ္ခါမွ မထိုးဖူးဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပည့္မထိုးဖူးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ထိုးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
သင့်ကလေးရဲ့ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အားကစားလုပ်ခြင်းကလည်း အရေးပါပါတယ်
၃၁.၅.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
● အသက် ၂ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်
ကလေးငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အစပြုပါ။ ဘောလုံးကို လှိမ့်တာ၊ ပစ်တာ၊ ဖမ်းတာကနေ စပါ။ ကလေးရဲ့ အား၊ ဟန်ချက်ထိန်းတာတွေက အရမ်းမဖွံဖြိုးသေးတဲ့အတွက် တခြားအားကစားနည်းတွေကို မသင်ပေးသင့်ပါဘူး။
● အသက် ၆ နှစ်ကနေ ၉ နှစ်
လှေကားပေးတက်တာ၊ ဘားခိုတာ၊ ဒန်းစီးတာ၊ လျှောစီးတာ စတဲ့ ကစားန...
ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများနဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားရောဂါ
၃ဝ.၅.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေထဲမှာ Impetigo လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားယားနာတစ်မျိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ပြီး ပြည်တည်နာအနေနဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဆေးကုသမှုပေးလိုက်ပါက ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ ရောဂါကူးစက်ဖို့ကတော့ အလွန်လ...